Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ahụike zuru ụwa ọnụ: ụwa ọhụrụ mgbe COVID gasịrị
Ihe karịrị otu afọ kemgbe ọrịa COVID-19 malitere, ụwa na-enweta nkuzi amụtara iji nyere aka mgbake zuru ụwa ọnụ ma gbochie otu mmejọ ahụ ka emee ọzọ na ọnọdụ ahụike mberede na-agaghị ekwe omume n'ọdịnihu.
Ahụike: Nhọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị - Sayensị, ịdị n'otu, Ngwọta, nke kachasị ọhụrụ n'usoro utu aha emepụtara na mmekorita ya na World Health Organisation, na-atụle otu esi echekwa obodo zuru ụwa ọnụ nke ọma megide mmejọ ndị a na-ahụ n'oge ọrịa na-efe efe ma na-achọ azịza dabere na sayensị nke. arụ ọrụ maka mmadụ niile. Mbipụta mbụ na usoro a kpọrọ oku maka mkpuchi ahụike ụwa niile, ebe nke abụọ kpọkuru ndị isi ụwa ka ha dịrị n'otu na nzaghachi ha na COVID-19.
Dị ka ọ dị na mbipụta ndị gara aga, mbipụta ahụ nwere akụkọ ndị sitere n'ahịrị ndị odee ama ama. Ha gụnyere Tedros Adhanom Ghebreyesus, onye isi oche WHO, Amina J Mohammed, osote odeakwụkwọ ukwu nke United Nations, na Right Honorable Gordon Brown, onye nnọchi anya WHO maka inye ego ahụike ụwa niile na onye bụbu praịm minista nke United Kingdom.
Ngalaba 'Ịdị n'Otu' na-enyocha itinye ego na nchekwa ahụike n'ọdịnihu yana ụzọ ọhụrụ nke nwere ike imeghe okporo ụzọ ahụike maka mmadụ niile. Na ngalaba 'Sayensị', ndị edemede gụnyere Carlos Alvarado Quesada, onye isi oche nke Republic of Costa Rica, tụlee ka ụwa nwere ike isi na-aga n'ihu na nkuzi sitere n'oge gara aga yana ihe kpatara nlekọta ahụike ga-agafe oke. Ngalaba 'Ngwọta' na-eleba anya ka anyị nwere ike isi kwalite ahụike site n'ilekọta ọdịdị na ihe kpatara anyị ji eji egwu mgbochi mgbochi ọrịa kpọrọ ihe.
Ahụike: Nhọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị - Sayensị, ịdị n'otu, Ngwọta bụ mbipụta gọọmentị nke Global Governance Project emepụtara na mmekorita ya na Òtù Ahụ Ike Ụwa. The Global Governance Project bụ ihe jikọrọ aka n'etiti GT Media Group, ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na London, Mmemme Ọchịchị zuru ụwa ọnụ nke dabeere na Mahadum Toronto, na Global Health Center na Ụlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ nke International na Development Studies na Geneva.
Jamaica na-akpọsa ọrụ ụgbọ elu ọhụrụ site na Stockholm gaa…
Kedu ihe kpatara ntuli aka UNWTO kwesịrị iji bụrụ ihe na-eche ngwa ngwa…
Ịhazigharị njem nlegharị anya maka ọdịnihu na ụwa: A...
Mayday, Mayday site n'aka ndị omebe iwu US niile na ndị nnọchi anya…